Ny Hero Heroista dia manangana vondrom-piarahamonina fizahan-tany iray isaky ny mandeha - saika
Home » Lahatsoratra farany farany » People » Ny Hero Heroista dia manangana vondrom-piarahamonina fizahan-tany iray isaky ny mandeha - saika
Vaovao Mafana Bhutan • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • Vaovao farany mikasika ny Però • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • fanorenana • Vaovao Mafana Tanzania • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
voatifitra ny lohany robin
Tambajotra fizahan-tany manerantany nanome voninahitra an'i Robin Richman tamin'ny herinandro lasa Lalao Steppin Out Adventure, any Chicago, Etazonia hiditra ny Hall of Heroes Fizahan-tany.
Ireo mpitari-dia avy any Tanzania ka hatrany Bhutan ary Però dia afaka misaotra an'i Robin noho ny nijanonany tamin'ny asa aman-draharaha nandalo ny areti-mandringana tamin'ny alàlan'ny fitarihana torolàlana virtoaly.
Robin Richman dia niasa mafy namorona programa mba hahafahan'ny programa fizahantany fizahan-tany madinidinika hanana fotoana ahazoana karama ilaina mandritra io fotoana io.
Ny Virtual Virtual Travel Travel Experience, antsoina hoe World Wonder Up Close and Personal, dia hampiasa ny olona izay nanangana na nandray anjara tamin'ireto fandaharana fizahan-tany momba ny fizahan-tany ireto mba hizara ny zavatra niainany tamin'ny mpandray anjara tamin'ny fomba rehetra, ka hanome asa ho azy ireo mandritra io fotoana io.
Izy dia mivarotra ny programa amin'ny lisitry ny mpandeha ary koa manitatra amin'ny hafa mba hahafahan'ny programa miorina amin'ny fiarahamonina hiasa hatrany amin'ny asan'izy ireo amin'ny fizarana ny kolontsainy, ny fomban-drazany amin'ny hafa. Nanomboka pejy GO FUND ME izy hanangonana fanomezana hanampiana ireo fitaovana sy internet mba hahafahan'ny ankamaroan'ny vola azo avy amin'ny fisoratana anarana ho any amin'ireo fandaharan'asan'ny fiarahamonina fa tsy handoavana ny fandaniana fotsiny.
Izy koa dia miasa mba hitady mpanohana sy mpanao dokam-barotra manana dokambarotra fohy ho an'io programa io mba hanefana ireo sarany ireo ihany koa. Ny fanantenany dia ny hitondra ny sasany amin'ireo haitao ao an-trano ary hanampy ny sasany amin'ireo vondrom-piarahamonina ireo hianatra fahaiza-manao vaovao amin'ny haitao.
Raha ny tanjon'ny programa dia ny hitondra vola any amin'ireo vondrom-piarahamonina miankina amin'ny mpizahatany ireo, mety ho fitaovana marketing lehibe izy io mba hitazomana ny toerana hiainan'ireo mpandeha rehefa manomboka mandeha indray izy ireo. Izy io koa dia manana ny fahafaha-manatona ireo olona tsy afaka mandeha.
Vahiny tao amin'ny hetsika fanombohana ny World Tourism Network i Robin tamin'ny herinandro lasa teo ary nanolotra mpitari-dia mpizahatany avy any Tanzania, Bhutan, ary Peroa tamina seho mivantana ary nampazava azy ireo tamin'ny tenin'izy ireo manokana hoe manao ahoana ny asany amin'ny fizahan-tany virtoaly.